'बजेट भाषणले विराटनगरमा औद्योगिक विकास प्राथमिकतामा नपरेको शङ्का उब्जिएको छ' : उद्योगी जाजु - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘बजेट भाषणले विराटनगरमा औद्योगिक विकास प्राथमिकतामा नपरेको शङ्का उब्जिएको छ’ : उद्योगी जाजु
Posted by Headline Nepal | १६ जेष्ठ २०७४, मंगलवार १८:१५ |
एशियन थाई फुडका प्रवन्ध निर्देशक महेश जाजु एक सफल उद्यमी हुन । जाजु लामो समयदेखी नेपालका प्रतिष्ठित र लोकप्रिय विस्कुट उत्पादन गर्नेमा पर्छन । पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको बजेटबारे उनले सुक्ष्म अध्ययन र चासो राखेका छन । भर्खरै जारी बजेटले नेपालका उद्योगलाई अहिलेको बजेटले कस्तो प्रभाव पार्छ र यो बजेटले उद्योगको विकास, र संरक्षण कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा हेडलाइन नेपालले जाजुसंग कुराकानी गरेको छ ।
सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको बजेटले उद्योग व्यवसायीलाई कसरी बजेट लक्षित गरेको छ ?
-सरकारबाट उर्जा र सडकसञ्जालको विषयमा सरकारले जुन एउटा लक्ष निर्धारण गरेको छ । त्यो धेरै नै सराहनिय छ । यसले गर्दा उर्जा र सडकसञ्जालको विकासका कारण अब आउने उद्योगह धेरै नै प्रभावित हुन्छन् । किनभने यो जुन सातसालमा १७ हजार मेगावाटको जुन लक्ष राखिएको छ, फास्ट ट्रयाक खोल्नेहरु, मध्यपहाडी मार्ग, तराई द्रुत मार्गलाई धेरै समेटिएको छ । यसले गर्दा मार्केटिङ बढेर जान्छ । हामीले आफ्नो सामान सर्वव्व्यापी बनाउन पाउछौँ ।
सरकारले कर नबढाउने तर करको दायरा बढाउने भनेको छ नि ? यसले उद्योगी व्यवसायीलाई असर गर्छ कि गर्दैन त ?
-करको दायरालाई बढाउने ठिक हो । अर्थमन्त्रालयले के–केमा कर छुट गर्ने विस्तृत अध्ययन गरेर कुरा अघि बढाएको भए राम्रो हुने थियो ।
निर्वाचनको आचारसंहितालाई ध्यानमा राखी मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थमा सामान्य वृद्धि गर्ने तथा अन्य कुराहरुमा हेरफेर गर्ने भनिएको छ । यसलाई कसरी हेनुहुन्छ ?
-मदिरा तथा सुर्ति जन्य पदार्थ प्रयोगलाई निरुत्साहित पार्न मुल्य बढाउन नै पर्ने हो । अन्य उद्योगहरु, जुन उद्योगमा हामी आत्मनिर्भर भैसकेका छौँ, यसमा आयातित सामानहरुलाई कसरी रोक लगाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिए बजेट घाटालाई कम गर्न सक्छौँ ।
व्यापार घाटा कम गर्नका निम्ति के गनुपर्ला ?
-व्यापारघाटा कम गर्नका निम्ति निर्यातमा वृद्धि गर्नु पर्छ । डलरमा हाम्रो सामान निर्यात गर्दा घाटा छैन तर ठुलो घाटा भनेको भारतमा निर्यात र आयातमा नै हो । भारतमा हामीले निर्यात गर्दा करमा अलिक वृद्धि गनुपर्छ ।
रानी ईटहरी धरान सडक ६ लेनको बनाउने भनेको छ , यसले उद्योगी व्यवसायीलाई पनि राहत हुन्छ की हुन्न ?
-६ लेन जति पनि बढाउदा उद्योगी व्यवसायीलाई फाईदा त हुन्छ । तर यो कुनै नयाँ कुरा आएको हैन । पहिलेको कुरा नै हो । विराटनगरको एक उद्योगपतिको नाताले मैले भन्छु, विराटनगरका लागि यो बजेटले एक छेऊ पनि छोएको छैन । किन भने विराटनगर विगत १० वर्षमा औद्योगिक राजधानीको रुपमा चिनिएको थियो, अहिले यो धेरै नै ओझेलमा परिसकेको छ । हामीले विराटनगरका लागि गरेको छलफल कार्यक्रममा स्वयम् अर्थमन्त्री ज्यु पनि प्रमुख अतिथीको रुपमा आउनुभएको थियो, हामीले विराटनगरको विकासका लागि के–के गर्नुपर्छ भनेर लेखेर नै उहाँलाई दिएका छौँ । यति भएमा हामीहरु विराटनगरको उद्योगलाई मन्द हुन दिँदैनौँ । भनेको थियौँ । तर आज बजेटले कत्ति पनि छोएको छैन ।
एकातिर सरकारले लगानीको वातावरण राम्रो हुँदै गयो, लगानीमा अब वृद्धि हुन्छ भनेको छ, अर्कातिर भने तपाईँले भनेजस्तो मोरङ सुनसरी करिडोर क्षेत्रमा उद्योगधन्दा घट्ने क्रम पनि छ, भनेपछि यो उद्योगमा वृद्धि गर्न त्यस क्षेत्रमा के–के गरेको भए राम्रो हुनेथियो ?
-मोरङ–सुनसरी करिडोरको विकासका लागि विशेष के–के गनुपर्छ भनेर हामीले त्यतिबेला नै अर्थमन्त्री महरालाई लेखेर दिएका थियौँ, क्षेत्रीय एयरपोर्टको कुरा गरेका थियौँ, तर एउटा कुरापनि विराटनगरमा हामीले बजेटमा पाएका छैनौँ । अहिलेको बजेट भाषणले विराटनगरमा औद्योगिक विकास प्राथमिकतामा नपारेको शङ्का उब्जिएको छ ।
सात वर्षभित्रमा १७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ, यसमा व्यवसायीहरुले खेल्नुपर्ने भुमिका के हुन सक्छ ? सरकारी तवरबाट कतिपय कुराहरु झन्झिटिला छन् भन्ने कुरा आएका छन्, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
-जतीपनि झन्झिटिला कुराहरु तथा समस्याहरु छन् त्यसलाई हामी र सरकारबिच छलफल चलाएर समाधान गर्छौँ । जलविद्युतमा नेपाल विश्वको दोस्रो ठुलो देश हो । विद्युत उत्पादनमा सरकारले अहिले जुन लक्ष्य राखेको छ र विगतका सरकारले पनि जुन लक्ष्य राखेको थियो , प्रशंसनीय काम गरेको छ । मलाई लाग्छ, यसबाट उद्योग व्यवसायी प्रभावित भएका छन् ।
कठमाण्डौँ निजगढ फास्ट ट्रयाकको कुरा जसरी अगाडी बढेको छ र हुलाकी मार्गको पनि सम्बोधन गरेको छ,, यसले उद्योग व्यवसायीलाई कस्तो असर गर्छ ?
-यसले उद्योगहरुको उत्पादित वस्तुको लागतमा नि असर गर्छ, । जति बाटो खुल्छ त्यति व्यापार व्यवसाय बढ्छ र जति व्यवसाय बढ्छ, त्यति सरकारलाई फाईदा हुन्छ ।
अहिले महानगरपालिका भैसके पश्चात व्यपारीहरुबाट पनि केहि मिश्रीत प्रतिक्रियाहरु आएका थिए । तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?
-मेरो यहि कुरा हो, विराटनगर उपमहानगरबाट महानगरपालिका हुनु धेरै खुसीको कुरा हो ।
विगतमा हेर्दा बजेट घोषणा हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएका थिए । त्यसैले अहिलेको यो बजेटलाई बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ ?
-यो बजेटलाई बलियो बनाउन कार्यान्वयन पक्षमा नै सरकारले निकै ध्यान दिनुपर्छ । अहिले जसरी बजेट सार्वजनिक भएको छ, त्यसमा नै सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ र जसबाट बजेट बलियो बन्छ ।
Previousयुवासंघ अध्यक्ष राजिव पहारीले गरे ‘चार प्रसंगमा चार प्रहार !’
Nextपार्टीभित्रको अन्तरविरोधका कारण महिला उमेद्वारको टिकट गुम्यो
कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा कृष्णचन्द्र नेपाली
१६ बैशाख २०७५, आईतवार १६:१०
‘पार्टी एकताको प्रक्रिया पूरा गरेर ओली-प्रचण्डले राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्छ’ : भट्टराई
१६ पुष २०७४, आईतवार ११:४०